Visa GO'DA in Europe KOOBAN la fili karo ee Payments Cryptocurrency
technology Payment ayaa la siiyaa macaamiisha adduunka oo dhan la heer sare ah sahlanaato. Haddii technology this uma shaqeeyo sidii lagu xayeysiiyaa, seenyo uu noqon doono mid aad u dhibaato. Visa gaaray korantada waaweyn ee Europe oo dhan inta badan maalinta jimcaha. Tani waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in xal kale, ay ka mid yihiin lacag kaash ah iyo xitaa cryptocurrency.
failure visa ee Europe
Macaamiisha iyo ganacsiga guud ahaan Yurub lahaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee bixinta on Friday. Qof kasta oo isku dayaya in ay sameeyaan xawaalad dhex kaarka lacag bixinta Visa ah ayaa laga yaabaa in dhibaato. Macaamilada ahaayeen xaddidan ama aan macquul ahayn si ay u dhamaystiraan. hay'adaha maaliyadda xataa talinayaa macaamiisha si ay u isticmaalaan lacag caddaan ah ama siyaabo kale oo lacag bixinta. Mastercard lama saameeyeen arrintan.
Visa ayaa si deg deg ah ayaa tilmaamay in macaamil ganacsi online soo gaaray yar ee arrintan la xiriira. Point-of-sale xawaalad hadhay “ku dhuftay oo seegi” inta badan maalintii. Isticmaalka Kaarka contactless for yar ahaa macquul ah kiisaska intooda badan. Waxaas oo dhan waxa ay muujinaysaa sida nugul nidaamka maaliyadeed waa in cillado farsamo.
Dhacdooyinka kuwan oo kale ah ayaa inta badan waxay keeni cawaaqib lama filaan ah. ATM kala duwan ee UK lahaa oo loo isticmaalo kaydka lacagta caddaanka ah ee ay galabtii. Inkastoo dhibaatada la xalin, qoraal rasmi ah aan la siin. sahlanaato The kaararka lacagta khuseysaa oo keliya haddii kaabayaasha adag in kaxeeya lacagahaas si fiican u shaqeeyo. Waayo, Visa, in ilaa hadda ay ahayd ka kiiska shalay.
Baahida loo qabo cryptocurrency iyo lacag caddaan ah
macaamiisha intooda badan ay weli lacag caddaan ah la heli karo in ay la tacaalaan xaaladaha sida. Inkasta oo fashilaad sida aad ayey u yar, waxay dhici kartaa wakhti kasta. Sidaas awgeed waa lagama yaabo in isticmaalka lacagta caddaanka ah weligiisba waa la gebi ahaanba la dhimi doonaa. Siidi ka keenta mashaqada kan ugu dambeeya, in laga yaabaa in ugu fiican.
Intaa waxaa dheer, ah Visa arrintan waxay muujinaysaa in hab kale oo lacag bixinta ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Si ka duwan kaararka lacagta iyo lacag caddaan ah, cryptocurrencies badbaadin karo maalin ee jeer sidan oo kale ahi. In kasta oo ay Degenaansho, Processor badan lacagta ka jira in ay la tacaalaan xawaalad cryptocurrency eegin isbedbedelka qiimaha ku meel gaar ah.
Adeegatada iyo shirkadaha u baahan tahay inaad bixiso bedelaadahani dareenka. Waa hab wanaagsan in ay sii siin joogto ah oo lacag caddaan on gacanta, laakiin waxa ay weli u baahan tahay kaarka lacag bixinta ku haboon in ay ka baxaan ATM. Cryptocurrencies waa ikhtiyaar, waxaa inkastoo maanta ay aqbalay oo keliya by a dukaamada yar. dhibaatooyinka noocan oo kale ah ay isbedeli karaan dhaqsiyaha badan uu.
Report Kraken Daily Market for 02.06.2018
$131M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
Huobi sarrifka crypto qorshaynaysa ballaarinta Brazil
Huobi, sarrifka ah cryptocurrency waaweyn ee asal ahaan kasoo jeeda China, waxaa ay kor u dejinta dukaanka ee Brazil.
Wakiil ka Huobi Group ayaa xaqiijiyay in ujeedada shirkadda inay soo galaan suuqa Brazil.
dadaal ayaa ka dhigan tallaabo kale oo qorshaha Huobi ee ballaarinta caalamka.
Madaxweynaha Baanka Dhexe ee Taiwan ayaa qorshaynaysa in ay isticmaalaan blockchain
ganaaxay dhexe Taiwan ee ...
Post Next:Salada Ethereum ImToken leeyahay $ 35B ee kayd, in ka badan 99% ee bangiyada Maraykanka